Home » Vaovao momba ny fahasalamana » Vaksinin'ny COVID-19: Manankarena aloha, fitsiriritana orinasa, mamindrà fo amintsika rehetra
Ny 16 isan-jaton'ny mponina manerantany no afaka mandray vaksininy. Hita taratra amin'ny ankamaroan'ny tontolo voalohany. Ny faniriana mihoa-pampana dia mety hanimba azy amin'ny rehetra- ary mety ho lasa ratsy tarehy sy mahafaty kokoa izany.
1) Manoloana ny firongatry ny areti-mandringana Covid-19 any India dia mirongatra ny tsindry hazo lena any amin'ireo firenena tandrefana manankarena, ao anatin'izany i Alemana, mba hamoahana ireo patanty vaksininy.
2) Raha tsy izany dia tsy tratra ny fiakarana maika amin'ny famokarana vaksinina, araka ny antso nataon'ny Amnesty International sy ny fikambanana fanampiana sy zon'olombelona hafa manodidina ny 30.
3) Araka izany, mbola mandà ny famotsorana ireo patanty i Alemana ary manandrana manome fahafaham-po an'i India amin'ny fanomezana fanampiana. Toy izany koa ny isa manankarena amin'ny firenena manankarena hafa, anisan'izany i Etazonia.
Fikambanana iraisam-pirenena misahana ny fanampiana sy zon'olombelona mihoatra ny 30 no manamafy ny antso mba hamotsorana vonjimaika ireo patanty amin'ny vaksinin'ny Covid-19.
Izy io dia misy ny Health vaovao tsy misy sisin-tany Initiative ataon'ny Tambajotra fizahan-tany manerantany.
Amin'ny ankapobeny dia "fantatra" fa "noho ny fahaizan'ny famokarana voafetra tsy ampy ny fatra vaksiny misy amin'izao fotoana izao" hamaly ny filàna manerantany.
Noho izany, amin'ny fanafoanana ny patanty dia tsy maintsy sokafana ny vaksiny bebe kokoa azo hamokarana amina toerana maro amin'ny ho avy, araka ny antso navoakan'ny Amnesty International. Raha tsy izany dia "tsy azo tanterahina ny fampitomboana ilaina amin'ny famokarana.